July 2011 | ပျူနိုင်ငံ
အမှန်ကိုပြောကြားခဲ့သည့် ဒုရဲမှူး၏မိသားစု ရဲတပ်ဖွဲ့အိမ်ယာကနေ နှင်ချခံရ
Posted by ကိုအောင် at 02:40 46 comments
အပိုင်း ( ၁)
လူသားတွေရဲ့အတ္တကို ငွေကြေးအာဏာ အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ဆိုတာ…အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းလည်းအကောင်ထည်ဖော်ဘို့ကိုလိုလားတဲ့ လူထုကြီးရဲ့ လူထုတော်လှန်ရေးကြီးလား………..
ကျနော် ၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံအကြောင်းကိုတင်ပြရာမှာ အကုန်လုံးကို ကျနော်မသိပါဘူး ၊ အခုကျနော်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးဟာသမိုင်းပြုစုနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ပြောပရစေ..ကျနော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းတင်ပြလိုက်ခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်…..ဒီအထဲမှာ သင်ခန်းစာယူစရာတွေ ဆင်ခြင်စရာတွေကို ရှစ်ဆယ့်ရှစ်လူထုအရေးတော်ပုံဆိုတာဘာမှန်းမသိတဲ့…လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေ..လေ့လာနိုင်ဘို့ကိုအထူးရည်ရွယ်ပါတယ်……
ကျနော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ၁၉၈၄ မှာစရောက်တယ်၊ နေရတာက တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ဘေးမှာရှိတဲ့ အင်းဝဆောင်မှာ…အဲဒီအခါကတဆောင်လုံးဥပဒေကျောင်းသားတွေချည်းပဲထားတယ်….ကျနော်ကံကောင်း တယ်ပြောရမလားမသိဘူးတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကိုစတက်တက်ချင်းမှာပဲ..စိတ်တူကိုယ်တူသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံ ဖြစ်တယ်လေ…..အခု အင်္ဂလန်မှာရှိနေတဲ့…နံမည်ကျော် ပန်းချီဆရာ ( ပန်းချီထိန်လင်း ) ၊ အောင်လင်း ( ယခုဂျပန် ) ၊ ဇော်လင်း ( မြင်းခြံ ) သူတို့နဲ့တွဲဖြစ်ကြတယ်…ဒီအထဲမှာ ကျနော်နဲ့ထိန်လင်း တူတာက စာဖတ်ဝါသနာပါတယ်…အနုပညာကိုခုံမင်တယ်……တံငါနားနီးတံငါပြောရမလားမသိဘူး..ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်း တွေပါ ..ကျနော်တို့ဝါသနာတွေကူးကုန်ကြတယ်…..ကျနော်တို့အားလုံးဟာ…စာဖတ်ခြင်းအလေ့မှာတော့ တော်တော်လေးကိုထုံကြတယ်…ကမာရွတ် လှည်းတန်းမှာရှိတဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တွေဆိုတာ…ကျနော်တို့မသိတဲ့ ဆိုင်မရှိသလောက်ပဲ……နောက်တခုကကျနော်တို့ကတက္ကသိုလ်အနုပညာအသင်းမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေဆိုတော့…..အင်းဝဆောင် အခန်းနံပါတ် ၉၃/၉၄ ဆိုတာ အနုပညာအသင်းရုံးခန်းကြီးလိုပဲ…..ကိုဇာဂနာ ၊ အရိုင်း ၊ ဖိုးဖြူ ၊ ကင်းကောင် ၊ စုတ်ဖွား ၊ဂေါ်ဇီလာတို့ကအစတော်တော်များများက….ကျနော်တို့ အဆောင် ကိုဝင်ထွက်သွားလာနေကြတာ ….တခါတခါ ကိုသူရ ခေါ် ကိုဇာဂနာနဲ့ စာပေရေးရာ ၊ အနုပညာ ကိစ္စတွေ ၊ အငြိမ့်ကိစ္စတွေဆွေးနွေးရင်းက..သူ့ရင်ထဲကပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့…အဲဒီအချိန်ကအစိုးရ(မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရ)ကိုမကျေနပ်တဲ့…စကားလုံးတွေကိုလည်းကြားရတတ်တယ်….တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ဟာ..ကျနော့်ဘ၀တလျှောက်လုံးမှာအလွတ်လပ်ဆုံးအပျော်ဆုံးနဲ့..အရသာအရှိဆုံးအချိန်တွေလို့ပဲပြောပရစေ…..ကံကောင်းထောက်မစွာ…လွတ်လပ်တဲ့ကျောင်းသားဘ၀မှာ..စာပေတွေကိုလေ့လာခွင့်ရလိုက်တာကိုက နိုင်ငံရေးရဲ့ခြေလှမ်းအစလို့ပဲပြောလို့ရနိုင်မလားမသိဘူး…..
အဲဒီအချိန်ကာလက အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ မဆလ ( မြန်မာ့ဆုိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရ )ဆိုတာ…၁၉၆၂ ခုနှစ်…မှာ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်သိမ်းပြီး..တပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ အစိုးရပေါ့….ပါတီ ဥက္ကဌ ကြီးကတော့..ဦးနေ၀င်း(ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း)……..တိုင်းပြည်ကိုသူအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့…ပုဂ္ဂလိကပိုင် လုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်ပြည်သူပိုင်သိမ်း…ဆိုရှယ်လစ်စနစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်ချီတက်မယ်ဆိုပြီး..တံခါး ပိတ်စီးပွားရေးဝါဒကိုလက်ကိုင်ပြုပြီး…ခရီးဆက်လာလိုက်တာ…တိုင်းပြည်ဟာ…ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဆင့်ကိုရောက်ခဲ့တယ်……လူထုတရပ်လုံးရဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမူ့ဟာ…..ပြောစရာစကားလုံးရှာမရလောက်အောင် အောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်လေ…တခါကအရှေ့တောင်အာရှမှာဂုဏ်တင့်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ… နောက်၂၆နှစ်အကြာမှာတော့…မျက်နှာငယ်စရာတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားတယ်…………..နိုင်ငံရဲ့အထွေထွေအကြပ် အတည်းကြီးဟာ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေကိုပါ ရိုက်ခပ်စေခဲ့တာပေါ့….တကယ်တော့ ကျနော်တို့ ပညာသင်ခဲ့ရတဲ့…တက္ကသိုလ်ဆိုတာ…နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင်..တော်တော်လေးကိုနိမ့်ကျသွားပါတယ်….ဒါကလည်း…လွတ်လပ်တဲ့ပညာရေးစနစ်ပုံစံတွေပျက်သုဉ်းပြီး…အာဏာရှင်စနစ်ကိုသက်ဆိုးရှည်စေမဲ့…ပညာရေးပုံစံတွေကိုအာဏာရှိသူများကစိတ်တိုင်းကျချယ်လှယ်ပြီး…စီမံခဲ့တာဆိုတော့..အားလုံးဟာ..ကမောက်ကမချည်းပါပဲ…..နောက်တခုအရေးကြီးဆုံးက…လူထုတရပ်လုံးရဲ့အထွေထွေအကြပ်အတည်းကြီးကသားသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ကျောင်းသားများကိုလာရိုက်ခပ်စေခဲ့တာအမှန်ပါ…ဒါ့ကြောင့်၁၉၆၂စစ်အာဏာရှင်များအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့ ကျောင်းသားများဟာ အံတုတော်လှန်ခဲ့ကြတာ……….
Posted by ကိုအောင် at 01:232comments
ဒီလင့်ခ်ကနေ ထပ်ဆင့်ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။ ကျနော့်ဘလော့ရဲ့ စာဖတ်သူများ ခင်ဗျာ ...
အခုရက်ပိုင်း အလုပ်နည်းနည်း များနေလို့ ရေးလက်စ “အမှတ်တရ”
သရဲဇာတ်လမ်း အတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ၊ လောလောဆယ်တော့
ဘောလုံးကွင်းထဲက သရဲတွေကို အရင် အားပေးကြပါအုံး ...။)
Posted by ကိုအောင် at 13:322comments
ရေးသူ- နတ်မောက် ဘုန်းကျော်
(ငမိုး)ကို လူအများတကာက သေလေပြီဟုပြောကြသည်။
အမှန်မှာကား ( ငမိုး )မသေသေးဟု ထင်ပါသည် ။ ယခု ဇန်န၀ါရီလ
တစ်ခုသော နံနက်ခင်း ချမ်းချမ်းစီးစီးထဲတွင် တပ်မတော်မော်ကွန်းတိုက်
၏ အောက်ထပ်၌ “ငမိုး (ခေါ်)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း” ကိုအမှတ်မထင်
ကျွန်တော် တွေ့ရ၏။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တွေ့ကြရာ၌ ယခင်တုန်းကလို
၀မ်းသာအယ်လဲမရှိကြ။ သူကလည်း သူ့အတွေးနှင့်သူ ငိုင်နေ၏။
ကျွန်တော့်မှာလည်း ရင်ထဲမှာ နာနေ၏။ ဘာအတွက် အသဲနာ,ရင်နာ
ဖြစ်ရသည်ကိုကား ကျွန်တော် ဖွင့်မပြောချင်။ တစ်ခါတုန်းက (ငမိုး)
အကြောင်း “ဂျာနယ်ကျော်”ထဲတွင် ဖွင့်ပြောဘူးသဖြင့် ငါးကြော်စားက
ရန်ကုန်ထောင်ထဲ (၃) လကျော်ဝါဆို ခဲ့ရဘူး၏။ ထို့ ကြောင့်နာနေသော
ငမိုး သည် သူ၏ အထုပ္ပတ္တိကို စီကာစဉ်ကာပြသထားသော မှန်ဘီရို
များအား ဦးခေါင်းငိုက်ဆိုက်ဖြင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက်လံကြည့်ရှုနေ၏။
ထိုမှန်ဘီရို များထဲ၌ တက္ကသိုလ် သိပ္ပံဌာနမှ ကြီးမှူးသော ပြပွဲတွင်
တပ်မတော် မော်ကွန်းတိုက်မှ (ငမိုး)၏ ဓါတ်ပုံ,စာရွက်စာတမ်း,အ၀တ်
အစား,အသုံးအဆောင် ကလေးများကို စုဆောင်း၍ပြသထားဘူး၏။
တစ်ဆယ့် သုံးခုမြောက် မှန်ဘီရိုထဲတွင် (ငမိုး)၏ စီးကရက်ဗူး မီးခြစ်
နှင့် ပလေးယားစီးကရက် (၆)လိပ်ရှိ၏။ ငမိုး သည် ဘာမပြော
ညာမပြော စီးကရက်တစ်လိပ်ကိုယူပြီး မီးညှိသောက် နေလေရာ
သူ၏ စီးကရက်မှ မီးခိုးငွေ့များသည် တခဏအတွင်း မော်ကွန်းတိုက်
အောက်ထပ်၌ ပြည့်လျှံ၍ သွားလေ၏။ စီးကရက် မီးခိုး အနံ့ကြောင့်
ကျွန်တော်၏ ဦးခေါင်း သည် ရီဝေမူးနောက်လာ၏။ ကျွန်တော်၏
စိတ်သည် ရပ်တည်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ အတိတ်ဆီသို့ ထွက်ပြေးသွား
ငမိုး သည် ကျွန်တော့်ထက် အသက် ၆ နှစ်ခန့်ကြီးသည်။ ကျွန်တော်
ကျောင်းရောက်၍ ဆရာ ဦးသာလင်း၏ သူငယ်တန်းတွင် စာသင်နေချိန်
၀ယ် ငမိုးသည် ဆရာ ဦးဘသန်း(ဦးရွှေထိုက်)၏ တတိယတန်းလောက်
တွင် ရောက်နေပေပြီ။ ငမိုးနှင့် ကျွန်တော် အသက်ချင်း ကွာခြားသလို
စာသင်ရသော အတန်းလည်း ကွာခြား၏။ကျွန်တော်၏ ၀မ်းကွဲအကို
ကြွက်ကဒိုး(ခေါ်) ကိုဘအေး၊ ယခု ကျွန်တော့် ယောက်ဖ ကိုဘို၊
ကိုဖိုးနီ စသော သူများသာ ငမိုးနှင့် တစ်တန်းထဲ စာသင်ကြရ၏။
ငယ်ရွယ်စဉ် ကလေးဘ၀က ဖြစ်၍ ရေးရေးသာ မှတ်မိတော့၏။
Posted by ကိုအောင် at 00:549comments
The Burma Conspiracy ရုပ်ရှင်ကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အခမဲ့ ကြည့်လို့ရပါပြီ
အင်တာနက်ပေါ်တွင် အခမဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်သော လင့်ခ်(links)များမှာ ...
(၁)ဒီနေရာက လင့်ခ်ကို ဖိလိုက်ပါ ...
(၂)ဒီနေရာက လင့်ခ်ကို ဖိလိုက်ပါ ...
(၃)ဒီနေရာက လင့်ခ်ကို ဖိလိုက်ပါ ...
(၄)ဒီနေရာက လင့်ခ်ကို ဖိလိုက်ပါ ...
(၅)ဒီနေရာက လင့်ခ်ကို ဖိလိုက်ပါ ...
(ထိန်းလင်းဗွီဒီယိုစာမျက်နှာမှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by ကိုအောင် at 21:224comments
ဖြစ်စဉ် အကျဉ်း။ ။ …
မန္တလေးမြို့ ၆၂လမ်း၊ မနော်ရမံ ဥယျာဉ်ရှေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ဓါတ်ပုံနှင့် ပန်းစီးများဖြင့် တစ်ကိုယ် တော် ဝတ်ပြု နေသူ.........။
သူ့ ကို ထ’ရန်လာခေါ်သော သူ အစ်မနှင့်ပြောသော စကားများမှာ...
ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာ ကလေးတွေ သိတောင်မသိကြတော့ဘူး။ မိဘတွေက
ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း မပြောပြကြဘူး ။ မိဘတွေကိုက အဲလိုစိတ်ဓါတ်
တွေမရှိလို့ သားသမီးတွေ မသိတာ..။ ကျွန်တော့် သားသမီးတွေ
အဲလို အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး..။ နားလည်ရမယ်..ပြောချင်တာပြော..
ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးစားရမယ်...
(အစ်မမှ- နင့်ကို မလေးစားရဘူး မပြောဘူး၊ ကိုယ့်အိမ်ကနေ
ကျွန်တော့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အမှန်အတိုင်း ပြောရယင် လူတွေ
(အစ်မမှ- ဘယ်သူမှ မမေ့ဘူး..)
အခုလူတွေ...မမေ့ကြဘူးဆိုယင်.. ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ပြီး အလံ
တစ်ဝက်ထောင်လို့ ရတယ်..ဂုဏ်ပြုလို့ ရတယ်..။
ဒီလို လက်ဆင့်ကမ်းတာ ညံ့ဖြင်းလာလို့တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ တစ်မြို့
လုံး သူများ ကျွန်ဘဝ ရောက်နေတာ...။
(အစ်မမှ- သွားမယ်လာ.. ၄ နာရီ မပြည့်သေးဘူးလား..)
ညနေ ၄ နာရီမှ ထမယ်...။ ဒိပြင်နိုင်ငံကလာတိုက်တာလို့ သူများ
လက်အောက်ကျတာ မဟုတ်ပဲ.. ခုတော့ တရုတ် က အကုန်သိမ်းသွားပြီ...
ဟု အပြန်အလှန်ပြောဆိုတာ ကြားခဲ့ရပါတယ် (ပြောနေတာ တင်ပေးထား
သူအစ်မနှင့် အတူ ဦးလေး ဘုန်ကြီးတစ်ပါးလည်း လိုက်လာပါတယ်..။
ကိုဝိုင်ဝိုင်ကေ၏ facebook စာမျက်နှာမှ ထပ်ဆင့်ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။
Posted by ကိုအောင် at 12:102comments
၀မ်းဗိုက်အတွင်းမှ ကျောက်စရစ်ခဲများ အန်ထုတ်ခြင်း (မကွေးမြို့)
(ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့တတ်သူများ၊ ရွံ့ရှာတတ်သူများ၊
ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်များနှင့် အသက်ငယ်သူများ မကြည့်ရှုသင့်ပါ။)
မကွေးမြို့ အ.ထ.က (၃)က ကျောင်းသူလေးတစ်ဦး ပြုစားခံရပြီး
အန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေ ထွက်လာတယ်လို့
သိရပါတယ်၊ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နေ့စွဲက (၇.၇.၂၀၁၁)ပါ၊ ဆေးရုံမှာ
“အာထရာဆောင်” ရိုက်ကြည့်ပေမယ့် ဘာမှ မပေါ်ဘူးလို့ ပြောကြ
ပါတယ်၊ ယခုအခါ မကွေးဆေးရုံကြီးမှာ ကုသမှု ခံယူနေဆဲလို့ သိရပါတယ်။
သြော် ... ဒါနဲ့ စကားမစပ် ...
ဦးသန်းရွှေတို့ ဦးသိန်းစိန်တို့ အန်ထုတ်လိုက်ရင် ဘာတွေ ထွက်လာမလဲ
လို့ စာဖတ်သူတို့ ထင်ပါသလဲ ??? .... :P
ကျိန်းသေတာက ဦးသန်းရွှေ'သမီး သန္တာရွှေ အန်ထုတ်လိုက်ရင်တော့
စိန်တွေ ထွက်လာမှာတော့ အမှန်ပါပဲ .... :)
Posted by ကိုအောင် at 15:026comments
Labels: ဓာတ်ပုံများ, သတင်းများ
အိမ်ပေါ်ထပ်က သူတို့အုပ်စုရဲ့ ဆူဆူညံညံအသံတွေကြောင့်
အောက်ထပ်က ကိုစိုးနဲ့ မမအေးတို့ လင်မယားပါ အပေါ်ထပ်
ဆီ ပြေးတက်လာပါတယ်။ ဖြူဖြူတို့ နွေအေးတို့ ဘယ်လိုပြောပြော
ကိုစိုးကတော့ သရဲ တစ္ဆေဆန်ဆန် တဖက်အိမ်ဖက်က လာတဲ့
အသံများကို လက်မခံပါ၊ မမအေးကတော့ မျက်လုံး အ၀ိုင်းသား၊
ကိုစိုးတစ်ယောက် ခေါင်းရင်းဖက်နံရံက ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ပြီး
တဖက်အိမ်က ဘာသံများ ကြားရမလဲလို့ စူးစိုက် နားထောင်
နေပါတယ်။ ကိုစိုးရဲ့ အနောက်ကနေပြီး ဖြူဖြူတို့ မောင်နှမတသိုက်
အပါအ၀င် တီဗွီလာကြည့်တဲ့ သူတို့သူငယ်ချင်းအားလုံး တစ်ခုခု
ပေါ်လာနိူးဖြင့် မ၀ံမရဲဖြစ်စွာ စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။
အိမ်နှစ်အိမ်ကြား လမ်းကြားလေးထဲ တိုးဝင်လာတဲ့ လေပြေများက
သူတို့အတွက် အသဲယားစရာ၊ မဲမှောင်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ခေါင်းရင်း
ရဲ့ နံရံတွေကို ကြည့်ရင်း သူတို့ လက်မောင်းတွေပေါ်က “ကြက်သီး
မွေးညင်း”လေးတွေ ထ’သွားပါတယ်။ ဖြူဖြူတို့အိမ် ပြတင်းပေါက်ကနေ
ခေါင်းထွက်ပြီး ခေါင်းရင်းအိမ် ပြတင်းနံဘေးမှာ တစုံတခုများ ကြားရမလား
လို့ နားစွင့်အာရုံစိုက်နေတဲ့ ကိုစိုးကို ကြည့်ရင်း သူတို့အားလုံး ရင်ခုန်
နေကြပါတယ်။ မိနစ် (၂၀)ခန့် အကြာမှာတော့ ကိုစိုး’နူတ်ဖျားမှ …
“ဘာမှ မရှိပါဘူးကွာ၊ ညီလေးတို့ ညီမလေးတို့ ကြောက်မနေကြနဲ့
သူ့ရှေ့က မှောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေသော အိမ်ကြီးကို ကြည့်ရင် ကိုစိုး
ဆက်ပြောနေပုံက … သရဲရှိရင် ထင်ထင်ရှားရှား ပြလိုက်ပါလား၊ ဒီမှာ
သရဲထက်ကြီးတဲ့ သရဲဘကြီး ကိုစိုး ရောက်နေတယ်လို့ …..။ ကိုစိုးက
ရယ်စရာအဖြစ် ပြောလိုက်ပေမယ့် မမအေးကတော့ ကိုစိုး ကျောပြင်
ကို ထုရင်း အနည်းငယ် လန့်နေပုံရပါတယ်။
Posted by ကိုအောင် at 20:27 21 comments
မီးပူနဲ့ အကပ်ခံနေရတယ်လို့ ....
တနေ့တခြား ပိုပိုပူလာတယ်လို့ ....
မောင်ထိပ်ကွက်* အကြောင်း ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ...
လိုကာနီကော့စ်* အကြောင်း ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ...
ဟောင်ဒေါင်(Big Splash)*အကြောင်း ဒီနေရာမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ် ....
ဆိုကရေတီး*နဲ့ အရစ္စတိုတယ်(လ်)*= ခရစ်တော် မပေါ်ခင်ခေတ်က
ဂရိနိုင်ငံ၏ အတွေးအခေါ် ပညာရှင်များ။)
Posted by ကိုအောင် at 20:063comments
ဧရာဝတီ စာမျက်နှာက ဆောင်းပါးရှင် “ကြည်ဝေ” ရဲ့
“အခြေချ တရုတ်၊ နေရာပျောက် မြန်မာနှင့် မန္တလေး ကိုယ်ခံအား”
(ဒီနေရာမှာ နှိပ်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ ….)
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုစိုးထွန်းတို့၊ သတင်းစာ
ဆရာ ဦးကျော်ရင်မြင့်တို့၊ Eleven Media Group က CEO
ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်တို့ ပြောကြားချက်တွေက မှတ်သား
မောက္ခ ပညာရေး မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာက ဆောင်းပါးရှင် “၀င့်ထန်း”ရဲ့
“ကျားမေမေရဲ့ တိုက်ပွဲတေးသံ၊ တရုတ် မိဘ အုပ်ထိန်းနည်း”
ဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ….
ကျောင်းအားကစားမှာ မပါဝင်ရလို့ ဆင်ခြေတက်မလာနဲ့
တီဗွီကြည့်တာ ကွန်ပျူတာဂိမ်းဆော့တာ ခွင့်မပြုဘူး
ကျောင်းပြင်ပ အခြားပါဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ခွင့်မပြုဘူး
အတန်းတိုင်းမှာ အဆင့် A ထက် မလျော့ရဘူး
စန္ဒယားနဲ့ တယောကလွဲလို့ ဘယ်တူရိယာမှ မတီးခတ်ရဘူး
သူများအိမ် လိုက်မအိပ်ရဘူး” .....
Posted by ကိုအောင် at 01:337comments
BBC မြန်မာဌာနရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာကို အခုလေးပဲ
၀င်ကြည့်လိုက်တော့ NDF ခွဲထွက်အဖွဲ့ကို ဦးသိန်းညွန့်
ဦးဆောင်ပြီး ပါတီအသစ် ဖွဲ့လိုက်ကြောင်း ဖတ်ရှုရပါတယ်။
ပါတီအသစ်ဖြစ်တဲ့ “အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီပါတီသစ်”မှာ ဦးဆောင်
သူ စာရင်းကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ အမည်တစ်ခုကို ဖတ်ပြီး
အံအားသင့်သွားပါတယ်။ ….. “ဦးဖုန်းမြင့်ကြောင်” …..
စာမျက်နှာပေါ် စာရိုက်တဲ့သူက ပင်ပန်းလို့ သို့မဟုတ် လောကြီး
သွားလို့ အခုလို “အောင်”လို့ ရိုက်ရမယ့် နေရာမှာ “ကြောင်”
ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်တွေ မီဒီယာ
တွေလည်း အမှားနဲ့ မကင်းကြပါဘူး၊ ကျနော်တို့ ဘလော့ဂါတွေ
လည်း ကဗျာရေးရင် စာရေးရင် စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံလေးများ
အမှားအယွင်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အုပ်စုလိုက် အလုပ် လုပ်သူတွေ၊
လူကြီးတွေ မှားသွားရင် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ အလုပ်သဘောကို
နားလည် ပေးပါတယ်၊ ကျနော်တို့ မှားမိရင်လည်း …. “ကြောင်” ….
တယ်လို့ ထင်ပေးကြမလား ….. :P
(မှတ်ချက်။ ။ ကျနော် အခုလို ထောက်ပြလိုက်လို့ တာဝန်ကြသူကို
အရေးမယူဖို့ BBC မြန်မာဌာနကို မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။)
Posted by ကိုအောင် at 23:047comments
ငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်လေးတခုသွားသတိရတယ်။ ကျနော်တို့
ရပ်ကွက်ထဲက ကိုဖိုးလုံးဆိုတာ တော်တော်နာမည်ကြီးတယ်
အကောင်းကြီးတာတော့ မဟုတ်ဘူး ဆိုးတာ မိုက်ရိုင်း ရမ်းကားတာ၊
လူသတ်မှုဖြစ်ပြီး ထောင်ကပြန်လွတ်လာတော့ မိုက်ရိုင်းရမ်းကားတာ
ပိုဆိုးလာတယ်။ သူနဲ့တော်ယုံလူတွေက မယှဉ်ကြဘူး ရှောင်ကြ
တယ်၊ သူ အရက်ဖိုးတောင်းရင်လည်း တချို့သူတွေကကြောက်ကြ
တော့ ပေးကြတယ်၊ ဒါကို သူက သဘောကျ ဂုဏ်ယူနေတာ၊
လူတွေက သူ့ကိုကြောက်နေတာကို သူက ပီတိဖြစ်နေတာ။
လူတွေကို ကြောက်အောင်လုပ် အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျပြီးမှ
သူ့ဘ၀ကိုရပ်တည်နေရတာ၊ ထောင်ဆိုတာ သူ့ဘ၀အတွက်
အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်၊ လူတယောက်ကို ရိုက်လိုက် နှက်ရိုက်ရမှာ
ကိုလည်း နည်းနည်းလေးမှ ကိုယ်ချင်းမစာတတ်သူ…..
၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်တော့ သူ့ကို လူအုပ်ကြီးက
မဆလ အစိုးရသူလျှိုဆိုဝိုင်းဖမ်းပြီး သတ်မယ်လုပ်တယ်၊ အဲဒီတုန်းက
မြင်ကွင်းကို အခုထိမြင်ရောင်နေတုန်းပဲ၊ ရိုက်နှက်ထားလိုက်တာ
တကိုယ်လုံး ရစရာမရှိဘူး၊ ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေသိတော့
သူ့ကိုမသတ်ဖို့ ကျနော်တို့ မေတ္တာရပ်ခံ တယ်၊ နောက် ဆေးရုံကို
ပို့လိုက်တယ်၊ ဆေးရုံရောက်တော့ မျက်နှာဆိုတာဇီးရွက်လောက်
လေးပဲရှိတယ်၊ သူ့ကို ကယ်ဖို့ တစာစာတောင်းဆိုနေတာပဲ ကျနော်
တို့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီပါတယ်၊ အသက်ပြင်းတယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူး
…မသေဘူး၊ ဒီလိုနဲ့ နှစ်တွေဝေးသွားလိုက်တာ တနေ့ရိပ်သာတခုကို
ရောက်သွားရင်းနဲ့က ... သူနဲ့ပြန်ဆုံခွင့် ရလိုက်တယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာ
သူဟာ ရဟန်းဝါ-၁၀ ၀ါလောက် ရနေတဲ့ သံဃာတစ်ပါးဖြစ်နေပြီ၊
အတိတ်တခါက လူဆိုးလူမိုက်ကိုဖိုးလုံးဘ၀နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်မှ
ကျောင်းသားတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါပြောတယ်…..
ဒကာတို့ကျောင်းသားတွေကောင်းမူ့ကြောင့် ... ဦးဇင်းအသက် ရှင်သန်
သူကလည်းမရှိ ဆိုတော့…ဆိုးချင်သလောက်ဆိုး မိုက်ချင်သလောက်
မိုက်ပဲ…ဒကာကြီးတို့သိပါတယ်….ဦးဇင်းက အဲဒီတုန်းက ..အဲသလို
လူတွေကို အနိုင်ကျင့်ရတာကို သိပ်ပျော်တာ…..လူတယောက်ကို
ထိုးလိုက်ကြိတ်လိုက်ပြီးပြီဆို သိပ်ပီတိဖြစ်တာ…. အော်..တကယ်က
လူပြိန်းဆို တာ…ဗိုလ်ကျရတာကို သိပ်ကြိုက်တာ ဒကာကြီးရ……….”
Posted by ကိုအောင် at 12:284comments
လာမယ့် (၅.၇.၂၀၁၁)နေ့ဆိုရင် ကျနော့်ဖခင် ကွယ်လွန်သွား
တာ အနှစ်(၂၀) ပြည့်သွားပါပြီ၊ အခု ဇူလိုင်လ (၅)ရက်နေ့က
အင်္ဂါနေ့ဆိုတော့ အလှူလေး ဘာလေး လုပ်ရတာ အဆင်မပြေ
ပါဘူး၊ ဒါနဲ့ပဲ မနက်ဖြန် (၂)ရက်နေ့ စနေနေ့မှာ ဖေဖေ ကွယ်လွန်
ခြင်း အနှစ်(၂၀) ပြည့်အဖြစ် အိမ်နီးနားချင်း အသိမိတ်ဆွေတွေကို
ကြက်ဆီထမင်း ချက်ကျွေးမယ်လို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ကျနော့်ဖခင်က
နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာ ယုံကြည်သူ တစ်ဦးဖြစ်လို့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ
အက်စ်ပီးယား(Esbjerg) ခရိုင်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရောက် မြန်မာ
နိုင်ငံသား အများစု ၀တ်ပြုဆုတောင်းရာ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် ဘုရား
ကျောင်းထံ တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမယ်လို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
ကျနော့်ဖခင်ကို မော်ကွန်းဝင်တို့ နိုင်ငံဂုဏ်ရည်တို့ ခေတ်က သူ့
မိတ်ဆွေ စစ်ပြန်များက ဗိုလ်ဖုန်းမြင့် လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့
နိုင်ငံသားကဒ်ထဲမှာ ဗိုလ်ဖုန်းမြင့်(ခ) ဦးကျော်မြင့်လို့ ဖော်ပြထား
ပါတယ်။ စစ်တပ်ထဲမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ကာလတွေမှာ
“ဗောဓိသာရ” ဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင် တစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်
ခေတ် စစ်တက္ကသိုလ် မူလတန်း(ဂျပန်ခေတ်မှာ ယောနင်းဟု ခေါ်တဲ့
ဒုဗိုလ် သင်တန်း)နဲ့ ဖ.ဆ.ပ.လ ခေတ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း
အပတ်စဉ် (၁၀)မှာ စစ်ပညာ သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော (ယခု တရုတ်ပြည်)
အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ယခင် တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှာ အရာရှိအဆင့်
အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော ပို့ခိုင်းတဲ့
(ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့) စာ နှစ်စောင်ကို မန္တလေးမြို့မှာ သွားရောက် ပို့ခဲ့
တဲ့ ကိစ္စနှင့် ပက်သက်ပြီး အရေးယူခြင်း ခံရပါတယ်။ အရေးယူခဲ့တဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ ဒုချုပ်ဟောင်း “စမူဆာ ဗိုလ်အောင်ကြီး”ပါ။ ကျနော့်
ဖခင်ဟာ နိုင်ငံရေးအကြောင်း ၀ါဒတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူ
မဟုတ်ပါဘူး၊ အထက်အရာရှိက ပို့ခိုင်းတဲ့ စာကို သွားပို့ခဲ့တာပါ၊
စစ်တပ်တို့ ထုံးစံအတိုင်း အထက်က ပေးတဲ့ အမိန့်အတိုင်းပေါ့၊
“ချိတ်” လည်းပိတ်ထားတော့ ဖွင့်လည်း မဖတ်ရဲ၊ သို့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း
ကျတော့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောနဲ့ တောထဲ အဆက်အသွယ် လုပ်တဲ့
လမ်းကြောင်းတွေကို ကောက်ကြောင်းလိုက်ကြတော့ အဖေလည်း
မင်နီ အတားခံရပြီး စစ်ထောင်ထဲ ရောက်ပါတော့တယ်။
Posted by ကိုအောင် at 20:51 23 comments